Man The Yaa Leh Ilaah, waayo, wuxuu maalka — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Man The Yaa Leh Ilaah, waayo, wuxuu maalka
Ninka Ilaah wuxuu leeyahay, waayo, wuxuu maalka wax walba ee ka mid ah uu leeyahay. oo khasnadahayga caadiga ah Dad badan oo la diidi karaa isaga, ama haddii uu ogol yahay in ay iyaga leeyihiin, Raaxada iyaga la si cadho doonaa in ay marna lagama maarmaan noqon doona in uu farxad. Ama hadduu waa in uu arko inuu iyaga sii daayo, mid ka mid ah ka dib markii mid ka mid ah, ayuu dhib dareemi doontaa dareen inay kaa luntay, isagoo Source wax kasta waxa uu leeyahay in ka mid ah qanacsanaanta oo dhan, waxaan jeclahay oo dhan, dhan ku farxaan. Wax kasta oo dhici karta in uu waayi uu dhab ahaantii waxba laga badiyay, waayo, haatan waxaa oo dhan ayaa ka mid ah, oo isna wuu Gaarna leeyahay, sharci iyo weligeedba.
A.W. Tozer, The wadida Ilaah
kelleyR • August 19, 2013 at 9:04 waxaan ahay • Reply